China vegan eco makeup remover oiri hydrating yakazvimirira chitaridzi kuchenesa oiri kuchenesa gadzira rinodzora fekitori uye vanotengesa | Iris Runako
vegan eco makemikari anobvisa mafuta hydrating yakavanzika chitambi yekuchenesa mafuta kuchenesa gadzira rinobvisa
Iine 80% yemafuta emafuta emafuta, vegan uye hutsinye husina, ganda rechisikigo rinovaka muviri, kuchenesa kwakasimba.
MOQ: 1000 maPC
EXW mutengo: 1.55 ~ 3.99 / PCS
1.Deep Kuchenesa Oiri kubvisa makeup inonyungudutsa zvisaririra zvese zvevhu uye zvekuzora kunyangwe isina mvura lipstick uye mascara uchipa chikafu chako neo antioxidant-rich olive oil.
2.Rich akasiyana emafuta anoshanda nyowani zvigadzirwa, zvine mwero kudzivisa kweakawandisa ganda mafuta oiri, kuenzanisa ganda ph kukosha, ganda rakajeka girisi uye tsvina, zvichisiya ganda nyoro uye rakasununguka zuva rese.
3.Tora iyo chaiyo huwandu pane yekuzora donje, isa massage pane yako yakaoma chiso, uye zvinobva zvaenda kunoshanda. Wedzera mvura uye inoshanduka kuita mukaka, mavhitamini ane hupfumi hwakawanda unoshamba yakachena, ichisiya ganda rako richinzwa rakapfava uye rakarerwa; haimbomira kana kukora.
Zunza usati washandisa. Gutsa padhi padota nefomula uye kutsvaira kumeso kwese.
neine hunyoro kumeso kukwiza kusvika zvanyungudutswa zvakakwana, geza nemvura inodziya.
Pakupedzisira geza kumeso kwako futi nechenesa kumeso. Zvekuomesa-kubvisa-pora, bata bata padonje kwemasekonzi mashanu kuti unyungudike.
Shandisa mangwanani nemanheru.
Item Zita Kuchenesa mafuta
Kubatsira kwedu 1. Iine 80% yemafuta emuorivhi
2.Natural zvinovaka ganda, yakasimba kuchenesa
3.Fully emusified nemvura
MOQ 1000 maPC
Saizi 11 * 4.6 * 4.6 cm / pcs
2.Q: Ndingawana sei sampuli yekutarisa yako mhando?
3.Q: Unogamuchira OEM here ODM uye Unogona kuita dhizaini kwatiri?
4.Q: Ndingatarisira kwenguva yakareba sei kuwana muyenzaniso?
5.Q: Zvakadii nezve inotungamira nguva yekugadzira kwakawanda?
6.Q: Ndeapi mazwi ako ekubhadhara?
7.Mubvunzo: Nzira yekutibata nesu?
Pashure: Matte muromo unonamira wega chitambi gadzira muromo wemuti mutengesi mutengesi moisturizer yakavanzika chitupa matte miromo tsvimbo
Zvadaro: highlighter makeup mutengesi cosmetic hapana logo highlighter makeup shimmer kumeso highlighter powder
kuchenesa mafuta pakavanzika chitupa
kuchenesa mafuta akawanda
eco makemikari anobvisa
hydrating mafuta ekuchenesa
mafuta ekuchenesa hydrophilic
gadzira mafuta ekuchenesa
Makeup yekuchenesa mafuta yakavanzika chitaridzi
mafuta emahara ekuzora
mafuta ekuzora anobvisa yakavanzika chitupa
yakavanzika chitambi yekuchenesa mafuta